clear start breakout clearing kit – dermalogica-mm
Regular price K71,000.00
သင်၏အရှင်းလင်းဆုံး၊ အကျန်းမာဆုံးအသားအရေကိုဤအပိုင်းသုံးပိုင်းပါသော Clear Start Breakout Clearing Skin Kit ဖြင့်ရယူပါ။ တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောရုက္ခဗေဒပညာရှင်များသည်အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိဘဲကွဲပြဲမှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကြသည်
contains Cleanse away dirt and excess oil with Breakout Clearing Foaming Wash 2.5 oz. Clear breakout-causing bacteria in 15 minutes with NEW Breakout Clearing Booster 0.34 oz. To relieve dryness and discomfort with Skin Soothing Hydrating Lotion 1.0 oz.
ခရီးသွားလာရေးအရွယ်အစားသည်အသားအရေကိုနေ့ရောညပါကြည်လင်ပြတ်သားစေရန်လွယ်ကူစေသည်။ ပိုလျှံရေနံကိုထိန်းချုပ်ကူညီပေးသည်။ လွယ်ကူစွာခရီးသွားနိုင်ရန် TSA နှင့်အဆင်ပြေသောအိတ်ထဲတွင်ပါရှိသည်။
Breakout Clearing မြှုပ်ရေချိုး a.m. + p.m. ကိုသုံးပါ နေ့စဉ်။ စိုစွတ်သောလက်များကိုအနည်းငယ်ထည့်ပြီးမျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ရင်ဘတ်ကိုပွတ်သပ်ပါ။ သင်၏မျက်လုံးထဲမှထွက်သွားပါ။ ပူနွေးသောရေနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေး။ Breakout Clearing Booster ကိုအညစ်အကြေးများ (သို့) breakout toရိယာသို့တိုက်ရိုက်သုံးပါ။ မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်နေ့ရောညပါအရေပြားသက်သာစေသောအဆီချဆေးကိုအသုံးပြုပါ။